Isimo Sezulu Siyasebenza! - Isikhungo se-EcoTechnology
Ekwindla yisikhathi samaqabunga amibalabala, isinongo samathanga konke, nezindlu ezihaunted. Iphinde ilethe izinsuku ezimfishane namazinga okushisa apholile, ngakho-ke yisikhathi esihle sokucabanga ngokusebenza kahle kwamandla wasekhaya! Uma indlu yakho ihlaselwa yimibhalo ebhaliwe ebandayo nezikweletu ezisabisayo zokusetshenziswa, ungathatha isinyathelo ukwenza ikhaya lakho libe namandla futhi lihlale likhululekile, ngenkathi wehlisa kakhulu izikweletu zakho.
Nayi imibono embalwa yokonga amandla nemali unyaka wonke:
Thola Ukuhlolwa Kwezamandla Ekhaya:
Noma ngabe uyaqasha noma ungumnikazi, uma ukhokha isikweletu sosizo eMassachusetts (nakwamanye amazwe amaningi) ufanelekile ukuhlolwa kwamandla kagesi okungabizi mali. Ngokuya ngokuthi uhlala kuphi, ungahle ufanelekele ukuthuthuka okuhlukahlukene kwamandla, kufaka phakathi:
Izibani ezikhanyayo ze-LED
Amanzi okonga amanzi ompompi nezihloko zeshawa
Ukufakwa uphawu okuphelele komoya.
Ungase futhi ufanelekele izikhuthazo eziphanayo zokufakwa ekamelweni elisophahleni nasodongeni, nezaphulelo zokushisa okuphezulu kanye nezinhlelo zamanzi ashisayo nemishini ye-Energy Star. Vakashela Iwebhusayithi yethu or IMassSave ukuze ufunde kabanzi futhi uqalise namuhla!
Funda amanye amasu we-DIY wokwenza isimo sezulu:
Ungaqala ngokulondolozwa ngokushesha ngamathuluzi ambalwa avamile nezinto zokwakha ezitholakala ezitolo eziningi zehadiwe. Ukwehliswa kwesimo sezulu nokususa isimo sezulu kuzungeza amafasitela neminyango ebhaliwe, ukugcwalisa izikhala ezingaphansi nokuqhekeka nge-spray foam sealant, noma ukwengeza ukushanela emnyango ovuzayo ngezinye zezindlela ezimbalwa ezilula futhi ezingabizi kakhulu ongaqala ngazo ukunciphisa izindleko zakho zamandla futhi ukwandisa amazinga akho okududuza endlini. Ukuze ufunde kabanzi, bukela i- i-Virtual Weatherization Workshop.
Futhi khumbula: isimo sezulu sibuye sithuthukise ikhwalithi yomoya, sandise ukulawulwa komswakama, futhi singasiza ekuvimbeleni amadamu e-ice, ukuqandisa amapayipi, nokukhula kwesikhunta kusuka ekucineni!
Ufuna izeluleko ezilula zokonga amandla ongazenza namuhla ezinikeza ukonga okusheshayo?
Cisha amalambu emakamelweni angahlali muntu.
Faka i-smart power strip ukucisha yonke i-electronics yakho engasetshenziswanga.
Hlanza izingubo zakho emanzini abandayo.
Faka isibali sikhathi eshaweni yakho ukukusiza uthathe imishanguzo emifushane.
Yehlisa i-thermostat yakho yehle ngama-degree ayi-5-10 ebusuku (noma okungcono, faka i-thermostat ehlelwe).
Vula amakhethini akho ukuze uvumele ilanga lifudumale ekhaya lakho emini bese uwavala ebusuku ukugcina lokho kushisa ngaphakathi. Ukususa amafasitela wesikrini angadingeki ebusika nakho kungakhuphula inzuzo yakho yelanga!
Thenga imikhiqizo eyonga amandla bese ugcine nge-CET! Ungathenga izinto zokukhanyisa ezonga ugesi eziphansi nezindleko zesimo sezulu kwa Izidingo ze-EcoBuilding isitolo eSpringfield.
Isimo Sezulu Sisebenza: Amathiphu we-DIY Home Weatherization kusukela Isikhungo se-EcoTechnology on Vimeo.
By Ozette Ostrow|2020-10-30T11:44:39-04:00Okthoba 29th, i-2020|Energy Efficiency, Amandla okusindisa, Luhlaza Amakhaya, Ukusimama|